चितवनसहित देशभरका नर्स आन्दोलित, ‘स्वयंसेवी र श्रम शोषणबाट मुक्त गराऊ’ – Saurahaonline.com
चितवनसहित देशभरका नर्स आन्दोलित, ‘स्वयंसेवी र श्रम शोषणबाट मुक्त गराऊ’
चितवन, ३० पुस । सेतो पोशाकमा सजिएर रातदिन नभनी, लाजघीन नमानी बिरामीहरुको सेवा गर्ने नर्सहरु भित्रभित्रै आँशुमा डुबिरहेका छन् । बाहिर हेर्दा जोकोहीलाई लाग्छ, नर्सको जीवन सुन्दर छ । तर, वास्तवमा गहिराइमा पुग्ने हो भने नर्सको जीवन बाहिर हेर्दाजस्तो सुन्दर छैन चितवन पोष्टमा खबर छ ।
देशभरका नर्सहरु आफ्नो सेवा सुविधालाई लिएर यतिबेला आन्दोलित छन् । विभिन्न ११ बुँदे माग राख्दै आन्दोलित भएका नर्सहरुको जीवनकथा अत्यन्तै दयनीय देखिएको छ । चितवनजस्तो जिल्लामा पनि कति नर्सहरु महिनौ दिनसम्म स्वयंसेवीको रुपमा काम गर्न बाध्य छन् । कति नर्सहरु मासिक ६/८ हजारमा पनि काम गरिरहेका छन् । कस्तो बिडम्बना ! पीसीएल नर्सिङ पढ्न ८ लाखले पुग्दैन होला, तर मासिक ८ हजारमा काम गर्न बाध्य छन् नर्सहरु ।
नेपाल नर्सिङ संघको निर्देशनअनुसार चितवन नर्सिङ संघ पनि शनिबार आफ्नो सेवा सुविधाको माग गर्दै सडकमा उत्रियो ।
चितवनका नर्सहरु सेतो एप्रोनमा सडकमा निस्के र आफ्नो हकहितको नारा लगाए । ‘नर्सहरुको श्रम शोषण भइरहेको छ, कति नाम चलेका चितवनका अस्पतालहरुले स्वयंसेवीको रुपमा नर्सहरुलाई दलाइरहेका छन् । यसको निराकरणका लागि चितवनका नर्सहरु आन्दोलित हुनुपरेको हो’ चितवन नर्सिङ संघकी अध्यक्ष माया पाण्डेले भनिन् । चितवनकै नाम चलेका अस्पतालहरुले ६ हजारसम्ममा नर्सहरुलाई काममा पेलिरहेका उनले आरोप लगाइन् ।
कति होला नर्सको तलब ?
नेपालमा एउटी सामान्य नर्सको तलब कति होला ? उनीहरुको लवाइखुवाइ हेर्दा ३० हजारभन्दा बढी नै लाग्छ । तर, वास्तवमा उनीहरुको भित्री पीडा खोतल्दा उनीहरुको तलब ३० हजार एक चौथाइ पनि हुँदैन । सरकारी स्केलअनुसार एउटा पीसीएल नर्सको मासिक तलब झण्डै २८ हजार पुग्छ । तर, निजी अस्पतालहरुमा कति नर्सहरु स्वयंसेवीको रुपमा काम गर्न बाध्य छन् ।
‘चितवनमा झण्डै १०० जना नर्सहरु स्वयंसेवीको रुपमा काम गरिरहेका छन्’ संघकी अध्यक्ष माया पाण्डेले भनिन्, ‘चितवनमा करिब दुई हजार नर्सहरु कार्यरत होलान्, जसमा आधाभन्दा बढीको तलब १० हजारकोे हाराहारीमा
छ ।’ जागिर खाए पनि कति नर्सहरुले पाकेट खर्च बुबाआमासँग मागिरहेका छन् ।
नर्सिङ पेसालाई हाम्रो समाजमा राम्रो पेसाका रुपमा लिइन्छ । यही कारणले कैयौं किशोरीहरु नर्स बन्न लाखौं खर्च गरेर पढेका छन् । पढ्दाखेरि धेरै खर्च गरे पनि निजी अस्पतालहरु पढाइ खर्चलाई हेरेर पारिश्रमिक नदिएको गुनासो चितवनका नर्सहरुले गरेका छन् ।
चितवनमा नर्सको अवस्था
चितवनमा पीसीएल नर्स उत्पादन गर्ने कलेज १४ वटा छन् । बीएन नर्सिङ उत्पादन गर्ने कलेजहरु ४ वटा छन् । एउटा कलेजबाट वर्षमा ४० जना नर्स उत्पादन हुन्छ । चितवनका सबै कलेजबाट नर्सको उत्पादन वर्षको १ हजार ३८० हुन्छ । तर त्यतिकै संख्यामा नर्सहरु खपत हुने कुनै अवस्था छैन । धेरै विदेश गए पनि यहीँ केही गर्ने सोच बनाएका नर्सहरु अहिले बेरोजगार भएर बस्नुपरेको छ ।
‘कति बहिनीहरु छन् । जागिर खान पाएका छैनन् । उनीहरु स्वयंसेवीको रुपमा काम गर्न बाध्य छन् । आफ्नो कार्यक्षमता विकास गर्न पनि स्वयंसेवी भइरहेका छन्’ नर्समा विद्यावारिधी गरेकी चितवन मेडिकल कलेजमा कार्यरत विष्णु विष्टले भनिन्, ‘सरकारले नर्सहरुलाई स्वयंसेवी राख्न नपाउने नियम पनि कागजमा मात्र छ, यो नियम कार्यान्वयनमा आउन सकेन । त्यसैले त देशभरका नर्सहरु आन्दोलित हुनुपरेको हो ।’
नर्सहरु राज्यप्रति बढी आक्रोश पोखेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अधिकारसहितको नर्सिङ महाशाखा गठनको गर्न नर्सहरुले आवाज उठाइरहेका छन् । ‘नर्सहरुको जीवन बाहिर देखेजस्तो छैन, उनीहरु रातदिन काममा जोतिन्छन् । भनेजति बिदा पाउँदैनन् ।
अस्पतालका सञ्चालकहरुको मनोमानी छ । उनीहरुले चाहेको बेला खाली हात लिएर नर्सहरुलाई जागिरबाट अवकाश दिन्छन्’ चितवन मेडिकल कलेजका सहप्राध्यापक राजकुमार मेहताले भने ।
कुनै समय थियो, नर्सहरुले पढ्न थाले पछि नै जागिरको टुङ्गो लाग्थ्यो, तर अहिले नर्सहरुको उत्पादन ज्यादा भएका कारण उनीहरु बेरोजगार हुनुपरेको छ । ‘हाम्रा समयजस्तो छैन अहिले जागिर पाउन गाह्रो छ, नर्स उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्न दिन तर जागिर नदिने ? यो कस्तो नियम ? दिएका पनि श्रम शोषणमा पर्ने अवस्था छ’ चितवनकी पुरानी नर्स लक्ष्मी राजवंशीले भनिन् ।
‘शुक्रबार कालोपट्टी बाँधेर काम ग¥यौँ, शनिबार सडकमा निस्केका छौँ, हाम्रो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलित हुन्छौँ’ उनले बताइन् । निजी अस्पतालहरुले ज्यादै न्यून तलबमा २४ घण्टाभन्दा बढी काममा खटाएर श्रम शोषण गरिरहेका नर्सहरुले आरोप लगाएका छन् । नर्सहरुले अलग्गै महाशाखाको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने चितवन नर्सिङ संघको भनाइ छ ।
महँगीमा कसरी बाँच्ने ?
अस्पतालहरुले बिरामी जाँचको हरेक शुल्क बढाइरहेका हुन्छन् । अप्रेसन शुल्कहरु पनि बढिरहेकै छ । तर, नर्सको तलब वृद्धि हुन सकेको छैन । ‘भरतपुरमा एउटा सामान्य कोठाको भाडा अहिले ३ देखि ४ हजार पर्छ । बिहान बेलुका खाना र दिउँसको खाजामा कम्तीमा ५ हजार खर्च हुन्छ । अनि ८/१० हजार तलब खाएर नर्सहरुको जीवन कसरी धानिन्छ ?’ नर्स विष्णु विष्टले भनिन्, ‘भरतपुरमा एकजना कोठा भाडा लिएर पालिन कम्तीमा २० हजार चाहिन्छ । यस्तो महँगीमा नर्सहरु कसरी बाँच्न सक्छन् ?
माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन
माग पूरा नभएसम्म नर्सहरुको आन्दोलन चलिरहने बताइएको छ । नेपाल नर्सिङ संघका केन्द्रीय सदस्य रमेश सुव्बाले माघ ७ गतेसम्म पनि आफ्ना माग पूरा नभए २४ घण्टै काम छोडेर मन्त्रालयमा धर्ना दिने बताए । उनले भने, ‘हाम्रा ११ बुँदे विभिन्न माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन रोकिने छैन ।’